Mpanamboatra sy mpamatsy fampiharana - China Application Factory
Izy io dia sarimihetsika adiresy mafana TPU miempo izay mety amin'ny fifamatoran'ny PVC, hoditra vita amin'ny hoditra, lamba, fibre ary fitaovana hafa izay mila mari-pana ambany. Matetika izy io dia ampiasaina hanamboarana insol foam PU izay milamina amin'ny tontolo iainana ary tsy misy poizina. Raha ampitahaina amin'ny fifamatorana lakaoly misy rano, ...
Izy io dia sarimihetsika fusion PU fusion miaraka amin'ny fisehoana manjelanjelatra izay ampiharina amin'ny fatorana ny hoditra sy ny lamba, ary ny sehatry ny fanodinana fitaovana kiraro, indrindra ny fifamatoran'ny insoles Ossole sy ny insoles Hypoli. Ny mpanamboatra insole sasany dia maniry ny maripana miempo ambany, ny sasany kosa mialoha ...
Izy io dia takelaka fusion polyurethane mafana manjelanjelatra izay mety amin'ny fifamatoran'ny fibre super, hoditra, lamba landihazo, tabilao fibre vita amin'ny vera, sns. Izy io dia manana taratasy ifotony izay afaka manamora ny fitadiavana ny ...
Ity rafitra ity dia an'ny rafitra TPU. Izy io dia maodely izay novolavolaina nandritra ny taona maro mba hihaonana amin'ny fangatahan'ny mpanjifa ny elastika sy ny fisorohana rano. Farany lasa any amin'ny fanjakana matotra io. izay mety amin'ny faritra mitambatra amin'ny atin'akanjo lava, bras, ba kiraro ary lamba elastika misy ...
HD371B dia namboarina tamin'ny fitaovana TPU tamin'ny alàlan'ny fanovana sy fomular sasany. Matetika izy io dia ampiasaina amin'ny fehikibo telo sosona tsy tantera-drano, atin'akanjo tsy misy fangarony, paosy tsy misy fangarony, zipper tsy misy rano, fantsom-drano tsy misy fangarony, fitaovana tsy misy fangarony, fitafiana maro karazana, fitaovana hita taratra sy saha hafa. Ny fitambaran'ny pr ...